फेसबुकको 'एबाउट' - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
- अच्युत अर्याल
“ नमस्ते है नविनजी, आज त फस्ट बेन्च नै रीजर्भ गरीएछ त । ” आज पनि क्लास् भित्र छिर्नेबित्तिकै उनले हाँसेर भनिन् ।
मैले आज पनि अवाक् भएर तिनको अनुहार मात्र हेरेर लजाउँदै “ त्यस्तो होइन ” भने । उनी मेरो दायाँपट्टि नै बसिन् । लोकसेवा आयोगको नायब सुब्बाको तयारी कक्षामा पढ्न थालेको पहिलो दिनदेखि नै यी गहँुगोरी तर अत्यन्तै राम्री युवतिप्रति म धेरै आकर्षित भएको थिएँ । सधैं आफ्नो पातलो शरीरमा कुर्तासुरुवाल लगाएर आउने सो युवतीले पहिलो दिनमै मलाई “ नविनजी ” भनेर बोलाएकी थिइन् । कहिल्यै नदेखेकी युवतीले अचानक मेरो नामै लिएर बोलाउँदा म त आत्तिएको थिएँ , पछि पो उनले “ तपाईंको कापीमा हेरेर थाहा पा’को ” भनेपछि ढुक्क भएँ ।
हतपत्त कुनै नयाँ केटीसँग बोल्न अप्ठेरो लाग्ने मलाई सो युवतीले आफ्नो नाम “ मनिषा ” रहेको र उनी फर्पिङदेखि सो तयारी कक्षाको लागि पुतलीसडकसम्म आउने गरेको बताएकी थिइन् । मसँग त्यसरी आफैं कुरा गरेकीले धेरै बोलक्कड केटी हो भन्ने ठानेको थिएँ तर केही दिनमै मलाई थाहा भयो कि उनी मसँग बाहेक कक्षामा अरु कोहीसँग पनि त्यत्ति बोल्दिनरहेछिन् । तर मसँग त तिनी एकदम ‘ फ्रैंक ’ भएर कुरा गर्थिन् ।
“ हिजोको फस्ट क्लासमा संविधान शीर्षकको नोट दिएको थियो रे नि नविनजी । ” उनकै बारेमा सोचिरहेको मलाई उनकै आवजले झस्क्यायो ।
“ प्लीज, मलाई त्यो नोट सार्न दिनु’स् न । हिजो पनि ढिलो भएकी थिएँ नि त । के गर्नु टाढाबाट आउनुपर्छ, ढिलो भइहाल्छ । ”
“ ए, भइहाल्छ नि । आज लिएर जानु’स् , अनि भोलि सारेर ल्याउनु’स् न । ”
उनको लागि अब जे पनि दिन सक्छु जस्तो लाग्न थालेको थियो भने जाबो नोटको त के कुरा भयो र !
“ के हो नविनजी, खुब टोलाउन थाल्नुभएको छ नी । कसैले मनै चो¥यो कि क्या हो ? ” मुस्काउँदै जिस्क्याउने पारामा उनले भनेको यो वाक्यले मलाई झनै शिथिल तुल्यायो ।
“ अहँ, त्यस्तो केही हैन मनिषाजी । ” लजाउँदै र आफैंलाई सम्हाल्दै मैले भने ।
तर तिनको मुखबाट वास्तविकता नै निस्केको थियो । मेरो मन साँच्चै नै उनले चोरेकी थिइन् । “सहरमा गएर बाउको पैसामा पढेर मात्र हुन्छ ? सरकारी जागिर खा‘र देखा न । अनि मान्छु तँलाई । ” घर गएको बेलामा बुबाको मुखबाट निस्केको यो शब्दवाणको प्रहारले ढुन्मुन्निएर म सीधै नायब सुब्बाको तयारी कक्षाको लागि सो ठाउँमा पुगेको थिएँ । तर त्यस ठाउँमा भेटिएकी मनिषाले विस्तारै मलाई पहिलो प्रेमको आगोसमा लिन थालेकी थिइन् ।
जीवनमा कहिले पनि कुनै युवतीसँग नजिक नभएको मेरा लागि मनिषाको सामिप्यताले कता कता काउकुती लाग्न थालेको थियो । सँधै मेरो आँखा अगाडि उनका ती ठूला र गाजलु आँखा आउन थालेका थिए । राति सुत्नेबेलामा उनकै यादले निद्रा हराउन थालेको थियो भने निदाइयो भने पनि सपनामा उनैलाई देख्न थालेको थिएँ ।
कक्षा सकिएपछि सबै हिड्न थालेको बेलामा उनले भनीन्,“ हेर्नास् न नविनजी, घरमा भाइलाई एक कल गर्नुपर्ने , मेरोमा ब्यालेन्स नै सकिएको रहेछ । प्लीज एक कल गर्छु ल तपाईंको फोनबाट ? ”
सबैले एण्ड्रोइड फोन बोक्न थालेको यो जमानामा मैले अझै पनि ट्याकट्याक गरेर थिच्न पर्ने कलर्सको जमानादेखिको मोबाइल बोकिरहेको थिएँ । मोबाइल मार्फत मेरो इज्जतमाथि हमला हुनेवाला थियो । तर उनलाई फोन नदिउँ त कसरी । खुरुक्क आफ्नो फोन उनलाई सुम्पें । उनले पनि छोटो कुरा गरेर मलाई फोन फिर्ता गर्दै “ एण्ड्रोइड बोक्यो भने पढाइमा डिस्टर्ब हुने भएर यसतो फोन बोक्नुभएको होला हैन नवीनजी । मलाई त एन्ड्रोइडले विगारीसक्यो भन्या । ल त नविनजी , बाइ है । भोलि भेटौंला नी । ” भनेर फटाफट रत्नपार्कतिर हिडिन् । म भने फोन हातमा लिएर तिनी गएकै दिशातिर हेरिरहें । उनीसँग उनको मोबाइल नम्बर माग्न खोजेको पनि धेरै भइसकेको थियो तर सधैं आँटले धोका दिइरहेको थियो ।
रातको साँढे नौ बजिरहेको थियो, लोडसेडिङ भइरहेको त्यस बेलामा म मेरो कोठामा बेलुकीको खाना बनाउँदै थिएँ । “ टिङटिङ, टिङटिङ ” , फोनमा मेसेज आएको टोन सुनें । हेर्छु त, नयाँ नम्बरबाट मेसेज आएको रहेछ ।
“ हेलो नविनजी, खाना भो त ? म तपाईंले दिएको नोट सार्दै छु । अनि के गरिराखेको नि ? ”
म खुशीले गद्गद् भएँ । मनिषाले आफैं मेरो नम्बरमा मेसेज गरेकी रहेछिन् । सायद उनले मेरो नम्बर उनको भाइको रीसीभ्ड कलबाट थाहा पाएकी थिइन् । तुरुन्त रीप्लाई गरिहालें ।
“खाना बनाउँदै छु । मेरोमा अहिले लाइन छैन । खाना खाएर सुत्छु होला । मेरो नम्बर कसरी पाउनुभो ? ”
एकैछिनमा रीप्लाइ आइहाल्यो, “ तपाईंको नम्बरबाट मेरो भाइलाई फोन गरेको थिएँ नि, त्यहींबाट पाइहालें नि । अनि सधैं आफैं खाना बनाउने नविनजी, विहे गर्नुप¥यो नि त हेहे , लत गुडनाइट । ”
मेसेज पढेर फेरि म खुशी भएँ । अब म ‘कन्फर्म’ थिएँ कि मनिषाले पनि मलाई मन पराउँछिन् । रातभर उनको ती दुई मेसेजलाई मैले कम्तीमा पनि दुई सयचोटि पढें होला । त्यस दिनदेखि म उनलाई दिनको दुई देखि तीनवटा मेसेज गर्थें र उनी पनि मलाई रीप्लाइ गर्थिन् । तर कुरा भने खासै केही हुँदैनथ्यो, केवल पढाइसम्बन्धी औपचारिक कुराहरु मात्र हुन्थे र फेरि हाम्रो प्रत्येक दिन कक्षामा पनि भेट हुने भएकोले धेरै कुरा भने मेसेजमा हुँदैनथ्यो । फोनको मेसेजमा होस् या कक्षामा सँगै हुँदा , म उनीसँग प्रेमको बारेमा, जीवनको बारेमा र रोमान्सको बारेमा कुरा गर्न चाहन्थें, तर म नर्भस भएर “ कत्तिको पढ्दै हुनुहुन्छ ? मैले त खासै पढेको छैन । ” मात्र भन्ने गर्दथें । बरु उनी भने बेलाबेलामा पढाइलाई विषयान्तर गर्दै , “ गलफ्रेन्ड छैन ? तपाईंलाई कस्तो केटी मन पर्छ ? ” जस्ता प्रश्न गर्ने गर्दथिइन् जसको प्रत्युत्तरमा म जहिले पनि नर्भस भएर केही बोल्न नसकी रातो अनुहार पार्थें ।
बिस्तारै उनको घर परिवार र अरु कुराहरुबारे थाहा पाउने इच्छा लाग्न थाल्यो । तर उनीसँग सोध्ने आँट मसँग थिएन । त्यस्तैमा उनको बारेमा पत्ता लगाउने एउटा उपाय सुझ्यो । फेसबुकमा उनको एकाउन्ट सर्च गर्ने । तर त्यसको निम्ति फेसबुक चल्ने मोबाइल फोनको आवश्यकता थियो । पहिलोपटक एण्ड्रोयड फोन नभएकोमा नराम्रोसँग मन कुडियो ।
अर्कोदिन म बिहानै न्युरोड हानिएँ । साथीसँग बौले पैसा नपठाएको दुइ महिना भयो भनेर बाह्र हजार सापटी फुत्काएको पैसाले हनर्सको HOl U19 भन्ने एण्ड्रोइड फोन किनें । तत्काल पाँच सय ब्यालेन्स हालेर फेसबुकमा उनको पूरा नाम टाइप गरें । धेरै एकाउन्टको लिस्ट देखायो । तर तीमध्येमा मैले उनको फोटो चिनिहालें । फ्रेण्ड रिक्वेष्ट पठाए पछि उनको बारेमा एबाउटमा गएर हेर्न थालेको म अचानक केही देखेपछि छाँगाबाट खसेको जस्तो भएँ । मैले केही पनि देख्न सकिन र मेरो चेतना नै शून्य भएजस्तो लाग्यो । उनको एबाउटमा “ इन अ रिलेसनशीप ” थियो जसको मतलब उनी अरु नै कोहीसँग प्रेम सम्बन्धमा छिन् भन्ने हुन्छ ।
म निराश हुँदै काठमाडौंको धुवाँँ र धूलोबिच हिडिरहें । मेरो मन भक्कानिएको थियो । मेरा सम्पूर्ण सपनाहरु चकनाचुर भएका थिए । जीन्दगीको मेरो पहिलो प्रेम कोपिला लाग्नुभन्दा पहिले नै कुहिएर झरेको थियो ।
बेलुकी कक्षा जान मन त पटक्कै थिएन । तर पनि म गएँ । उनीसँग सधैंजसो भेट पनि भयो । उनमा केही पनि परिवर्तन थिएन । तर मलाई उनीसँग बोल्न पनि मन थिएन । म नबोलेको हुनाले उनले जिस्किने हिसाबमा भनिहालिन्,
“ के हो नविनजी, कसैले मायामा धोका दियो कि क्या हो ? बोल्नुभएको छैन नि । ”
मोरीले ठ्याक्कै मिलाएकी थिइन् । मैले धोका नै पाएको थिएँ । तर धोका दिने चाहिं मेरै आफ्नो भाग्य थियो । म फेरि पनि नबोलेको हुनाले होला उनी त्यसपछि फेरि बोलिनन् ।
कक्षा सकिएपछि छुट्नेबेलामा मैले न्वारनदेखि साँचेर राखेको अाँट बटुलेर उनलाई भने,
“ मनिषाजि, मैले तपाईंलाई फेसबुकमा खोजें नि । ”
“ हो र ? तर म खासै फेसबुक चलाउँदिन है । ”
मैले अब जे पर्ला पर्ला भन्ने सोचेर एक्कै स्वासमा भनिदिएँ, “ खै त हामीलाई अहिलेसम्म लुकाएर राख्ने, इन अ रिलेसनशीप रैछ नी त, अनि रिलेसन भ‘को मान्छेसँग चाहिं हामीलाई नभेटाउने ? ”
“ हो र ? कहाँ लेखेको छ, त्यस्तो ? मैले त राखेको छैन त । ”
मैले हाँसेर भने, “ एबाउटमा छ त ।”
“ लौ मैले त त्यस्तो कहिले पनि राखेको जस्तो लाग्दैन त । म त्यसलाई मेटाउँछु नि है । लौ त बाइ । ढिलो भयो के । ”
उनी त्यसो भन्दै सदाझै हतार हतार बाटो लागिन् ।
“ म त्यसलाई मेटाउँछु नि है ।…. ” यो वाक्यको मतलब हुन्छ उनी ‘इन अ रिलेसनशीप ’ छैन । म अचानक खुशीले झुम्न थालें । मेरो कानमा सेक्सोफोन र भायोलिनको रोमान्टिक धुन बज्न थाले र मेरो वरिपरि राता राता गुलाबका फुलहरु देख्न थालें । बनको बाघले खाओस् कि नखाओस्, मनको बाघले भने मलाई खाएछ भन्ने सोचेर आफैंले आफैंलाई गालि पनि गरें ।
अब भने मेरो ‘कन्फिडेन्स’ ह्वात्तै बढेर आयो । म अब उनलाई प्रपोज गर्ने मुडमा पुगिसकेको थिएँ । राति लोडसेडिङ थियो । मैले उनलाई मेसेजबाट नै प्रपोज गर्ने विचार गरें । तर अाँट चाहिँ आएको थिएन । त्यसैले वातावरण मिलाउन एउटा मेसेज गरें ।
“ हाइ मनिषाजी, अनि फेसबुकको एकाउन्टको एबाउट मिलाउनुभो त ? ”
म रीप्लाइ कुरेर बसिरहेको थिएँ । तर धेरै बेरसम्म पनि रीप्लाइ नआएपछि फेरि मेसेज गरें ।
“ के हो मनिषाजी, मेसेजको रीप्लाइ पनि नगर्ने ? ”
त्यसको केही क्षणपछि रीप्लाइ आयो ।
“ हाइ नविनजी, मैले मिलाउन त मिलाएँ । तर तपाईंलाई एउटा गोप्य कुरा ‘सेयर’ गर्छु है त । त्यो ‘इन ए रिलेसनशीप’ चाहिँ साँचो हो क्या । ऊ एउटा बोर्डिङमा पढाउँछ । उसको नाम विनोद हो र हामी एक अर्कालाई दुइ वर्षदेखि प्रेम गर्दछौं । वी आर इन ए रिलेसनशीप के । ल त, अहिलेलाई चाहिं गुडनाइट है । ”
म मेसेजलाई हेरेर टोलाइरहें । मेरा आँखाका कुनाबाट दुइ थोपा आँसुहरु गालातिर बग्दै थिए ।